दुई वर्षअघि ‘झुम्की’ फिल्म प्रदर्शन हुँदा हलमा दर्शक संख्या न्यून थियो । अहिले यही फिल्म युटयुबमा आउँदा अपलोड भएको तीन दिनमै ट्रेन्डिङको अघिल्लो स्थानमा आइपुगेको छ । सोमबारसम्म भ्युज झन्डै दस लाख पुग्दा बाह्र सय प्रतिक्रिया थिए ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा फिल्म सुटिङका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने रणनीति बनाउन काठमाडौंमा उक्त मुलुकका फिल्मकर्मी सम्मिलित बृहत् फिल्म सम्मेलन हुने भएको छ ।
चाड महिलाको, गीत पुरुषको
तीज आउन झन्डै डेढ महिना बाँकी छ, सांगीतिक माहोल भने सुरु भइसकेको छ । भदौ २७ मा परेको तीज (हरितालिका) लाई लिएर अहिले नै धमाधम म्युजिक भिडियोहरू रिलिज भइरहेका छन् । रोचक के भने, तीज गीतमा बिस्तारै पुरुष स्वर हावी हुँदै गएको छ ।
फिल्म सिटी कता !
सुशील पौडेल, राजेन्द्र मानन्धर
चलचित्र विकास बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश भण्डारीले कास्कीको धिताल गाउँमा फिल्म सिटी बनाउने घोषणा गरिदिए । फिल्मकर्मी उदय सुब्बाको संयोजकत्वमा निर्माण समिति बनाउँदै स्टुडियो निर्माणका लागि सरकारसमक्ष दुई अर्ब बजेट पनि माग गरे ।
प्रिन्स हयारीसँग विवाह गरेयता अभिनेत्री मेघान मार्केल समाचारको शीर्षक बनिरहेकी छन् । यस पटक उनको विवशतालाई लिएर खबर छापिएको छ । कुरा के भएछ भने, उनी तरकारीमा लसुन हालेको मन पराउने, लसुनका परिकार स्वाद मानीमानी खादिँरहिछन् । तर, उनकी बूढीसासु–आमा अर्थात् महारानी एलिजाबेथ लसुन भनेपछि दुरदुर भाग्ने !
‘रातको कुरा’ गर्दै प्रियंका–प्रमोद
कान्तिपुर टेलिभिजनकी भिजे संगीता श्रेष्ठको पहिलो निर्देशन ‘कथा काठमाडौं’ को नयाँ गीत ‘रातको कुरा...’ आइतबार सार्वजनिक भएको छ । इन्दिरा जोशीले गाएको गीतमा उनी पनि स्टेज गायिकाका रूपमा फिचरिङ छिन् । कलाकारहरू प्रियंका कार्की र नायक प्रमोद अग्रहरीले गीतमा बोल्ड सिन दिएका छन् ।